Kugara Husiku Hwose Reset My Sleep Cycle - BikeHike
Kugara Husiku Hwose Reset My Sleep Cycle
Ndinogadzirisa sei kutenderera kwangu kwekurara usiku hwose?
Ndinofanira kungomuka here kana ndisingakwanise kurara?
Humwe husiku hunogona kukanganisa hurongwa hwako hwekurara here?
Ko kudhonza husiku hwese kugadzirisa hurongwa hwako hwekurara here?
Unoputsa sei kutenderera kwakashata?
Zvakaipa here kungowana maawa mana ekurara manheru ega ega?
Kuvata pasi wakavhara maziso kunoreva kuzorora here?
Zvinotora nguva yakareba sei kupora kubva kune husiku hwese?
Ko melatonin inogona kugadzirisazve kutenderera kwekurara?
Ndinogadzirisa sei wachi yemuviri wangu?
Husiku hwese hwakaipa here?
Unofanira kugara zuva rose kuti ugadzirise purogiramu yekurara here?
Ndozvigadzirisa sei kuti ndirambe ndakarara husiku hwese?
Kumuka kwemaawa maviri ega ega ndizvo here?
Ndoita sei kuti ndisamuka ndisati ndamuka?
Sei ndichimuka manheru ega ega kuma3am?
Elon Musk anorara maawa mangani?
Ndingarara sei maawa masere mumaawa maviri?
Maawa mashanu ekurara ari nani pane kusavapo here?
Kwete, kuramba wakamuka nemaune kana kurara mukati mekupera kwevhiki hakugadzirisi nguva yako yekurara. Muchokwadi, kuita zvinhu izvi kunogona kukanganisa hurongwa hwako hwekurara zvakanyanya.
10 Mazano Ekugadzirisa Nguva Yako Yekurara Chinja nguva yako yekurara, asi shivirira. Usarara, kunyange kana uchinzwa wakaneta. Usarara mukati, uye simuka panguva imwe chete zuva rega rega. Iva akasimba pamusoro pekuomerera kuhurongwa hwako hwekurara. Dzivisa kuvhenekwa nechiedza usati wada kurara. Dzivisa kudya kana kuita maekisesaizi pedyo zvikuru nenguva yokurara.
Kana ukasarara, hope dzako dzinoramba dzichiwedzera kusvikira wawana kuzorora. Kurara kweawa 1 kusvika ku2 kunogona kuderedza dzvinyiriro yekurara uye kuita kuti unzwe usina kuneta mangwanani kupfuura zvawaizoita nokurara usiku hwose.
Mushure mehusiku husina kugadzikana vanhu vanofunga kuti vanogona kugadzirisa kurara kwakarasika nekukasira kurara uye kurara muzuva rinotevera. Izvi zvinobatsira kuti vanhu vanzwe kuzorora, asi chidzidzo chitsva chinoona kuti husiku humwe chete hwekushaikwa kwekurara hunokanganisa metabolism uye wachi yebhayoloji.
Denderedzwa rakasviba, mabhegi pasi pemaziso, kushama n'ai nguva dzose, uye kutamburira kuchengeta maziso ako akasvinura zvose zvinogona kutarisirwa kana iwe uchidhonza usiku hwose kugadzirisa purogiramu yako yekurara. Asi, kunze kwekunyanya kujeka, mhedzisiro yenguva pfupi pamuviri wako, kugara wakarara husiku hwese kunogona kuve nemhedzisiro yenguva refu pamuviri wako.
Pano tichavhara dzimwe nzira dzekuseta zvakare chirongwa chako chekurara kana iwe uchinzwa senge mutinhimira wako wakadzimwa. Ona Chiedza cheMangwanani. Rovedza muviri 3-4 Nguva pavhiki. Rongedza Purogiramu Yako Zvishoma Nezvishoma. Dzivisa Chiedza cheBlue Usati Warara. Usatora Naps. Rega Kudya Usati Warara. Gadzirisa Yekuzorora Pakurara Routine. Tora Rwendo rweKambi.
Vanhu vanorara zvishoma pane zvakakurudzirwa maawa manomwe kusvika masere pahusiku vanonyanya kurwara nechirwere chemoyo, kufutisa, kushushikana, chirwere cheshuga uye kunyangwe dementia, Fu nedzimwe nyanzvi dzinodaro.
Kunyangwe kuzorora nemeso ako akavharwa kusingatange kutenderera kwako kweREM uye kukubvumira kuti uvhare mune imwe nguva yekurara, inoramba ichipa mamwe mabhenefiti makuru. Kuvhara maziso ako kunodzikamisa pfungwa dzako uye kunozorodza tsandanyama nenhengo dzako. Vazhinji vanoridaidza se "kumuka kwakanyarara".
Ipfungwa yakanakawo kuwana kanenge maawa manomwe kusvika masere ekuzorora manheru ega ega. Izvi zvichabatsira muviri wako kuti udzoke pane zvakarongwa. Zvinogona kutora mazuva kana mavhiki kuti apore kubva mukushayiwa hope. Ingori awa imwe chete yekurara kurasikirwa inoda mazuva mana kuti upora.
Humbowo kubva kuzvidzidzo zvidiki zvekutsvagisa kunongedza kune melatonin yekuwedzera sezvingangoita kubatsira kugadzirisazve kurara-kumuka kutenderera. 7uye kuvandudza kurara muvanhu vane jet lag. Shift vashandi - vanhu vanoshanda panguva yehusiku - vanowanzo netsekana nezvinetso zvekurara zvine chekuita nekusarongeka kwecircadian rhythm.
Pazasi pane mamwe matipi anobatsira ekukubatsira iwe kuseta muviri wako wachi uye unakirwe nekuvhara kwako. Dzivisa chiedza chebhuruu usiku. Ronga kurara kwako. Usavata pamubhedha wakasvinura. Seta alarm. Vaka nzvimbo yakakodzera. Dzivisa kofi. Rovedza muviri zuva nezuva. Zvigadzirire Hurongwa.
Kurara husiku hwese kwakaipa kuhutano hwako hwenyama nekuti zvinokushaisa hope dzinodiwa. Kusarara zvakakwana uye kurara kwese kunogona kuderedza kurwisa kwemuviri wako kuchirwere uye kutapukirwa. Kusarara zvakanaka uye kusarara kunowedzerawo njodzi yako ye (3): High blood pressure.
Sarudza nguva yekurara uye yekumuka. Namatira kune idzi nguva zuva rega rega, kunyangwe pakupera kwevhiki kana mazuva ekuzorora. Edza kudzivisa kugara kana kurara mukati kweawa inopfuura imwe kusvika maviri. Nekutevera hurongwa hwenguva dzose, wachi yako yemukati inogona kugadzira maitiro matsva.
Kana uchifanira kurara husiku hwese, matipi anotevera anogona kukubatsira kuti uzviite zvakachengeteka. Dzidzira. Nzira iri nyore yekurara husiku hwese ndeye kuseta zvakare wachi yako yemukati. Caffeinate. Asi dzivisa zvinwiwa zvinopa simba. Chimborara zvako. Simuka ufambe. Wana mamwe marambi akajeka. Shandisa midziyo yako. Geza.
Vazhinji vedu tinomuka katatu kana kana mukati meusiku nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, uye ikoku kunorangarirwa sorutivi rwemuitiro wenguva dzose wokurara. Zvisinei, vazhinji vedu tinomuka kakawanda, dzimwe nguva kunyange maawa maviri kusvika matatu manheru. Ichi ndicho chikonzero chekunetseka.
Nzira yekurega kumuka nekukurumidza kuita maekisesaizi. kudzivisa caffeine nezvimwe zvinokurudzira mushure memangwanani emasikati (1 kana 2 pm) kuvhara chiedza muimba yako nekuichengeta yakanyarara, yakasviba, uye yakagadzikana. kuvhara chiratidziro pawachi yako uye chero mamwe madiki (kana anobwaira) mwenje mukamuri.
Kana iwe ukamuka na3 am kana imwe nguva uye usingakwanise kurara zvakare, zvinogona kunge zviri nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Izvi zvinosanganisira kureruka kwekurara, kushushikana, kana mamiriro ehutano ari pasi. Kumutswa kwako na3 am kunogona kuitika zvisingaite uye kusava chinhu chakakomba, asi husiku hwese seizvi hunogona kuve chiratidzo chekushaya hope.
Mukuonekwa nguva pfupi yadarika paJoe Rogan Zvakaitika podcast, Elon Musk akati anorara angangoita maawa matanhatu husiku hwega hwega-nezvinodikanwa, kana zvikasadaro basa rake rinotambura. Iko kubvumidzwa neMusk inofambiswa nedata ndechimwe chese akashanda zvakanyanya muvambi kana maneja webhizinesi anofanirwa kukoshesa.
Nekudaro, nzira dzinotevera dzinogona kukubatsira kuti upfuure nenguva pfupi yekushaikwa kwekurara. Wana maekisesaizi akareruka. Dzivisa skrini kweawa imwe usati warara. Chengetedza masikirini uye zvimwe zvinokanganisa kunze kweimba yako yekurara. Ita shuwa kuti imba yako yakasviba. Deredza kutora caffeine. Idya kudya kunovaka muviri. Dzivisa doro.
Dzimwe nguva hupenyu hunofona uye hatirare zvakakwana. Asi maawa mashanu ekurara kunze kweawa makumi maviri nemana pazuva haana kukwana, kunyanya munguva refu. Maererano neongororo ya24 yevanhu vanopfuura zviuru gumi, kugona kwemuviri kushanda kunodzikira kana kurara kusiri mumaawa manomwe kusvika masere.
Ko Kugara Husiku Hwose Kugadzirisa Kurara Kwako Kutenderera
Kurumidza Mhinduro: Kuramba Wakamira Reset My Sleep Cycle
Ko Kuramba Wakasimudza Zvese Kunogona Kugadzirisa Kurara Kwako Kutenderera
Mubvunzo: Maitiro Ekugadzirisa Kurara Kutenderera Muhusiku Humwe
Mubvunzo: Ungaite Sei Patsva Kurara Kwako Muhusiku Humwe
Inogona Xanax Reset Sleep Cycle
Mubvunzo: Melatonin Inogona Kudzoreredza Kurara Kutenderera
Mhinduro Yekukurumidza: Unogona Kugadzirisa Kurara Kwako Kutenderera
Mubvunzo: Ita Naps Reset Your Sleep Cycle
Ko Kutsanya Kunogadzirisa Kurara Kwako Kwekurara
Mubvunzo: Inguva Yakadii Kugadzirisa Kurara Kutenderera
Mubvunzo: Maitiro Ekugadzirisa Kurara Kutenderera Nekukurumidza
Previous Post: Mubvunzo: Ko Imwe Cycle yeTesttosterone Ichakukuvadza
Next Post: Mhinduro Yekukurumidza: Ndeapi Mahotera Unogona Kuona Bhora Rinodonha MuNyc